Heavy Duty Machine Zvishandiso, CNC Lathe, Mechanical Seal - Gadziridza
Makore 30 ruzivo
Vanopfuura vashandi ve1300
Kupfuura 29500 mita mita
Chinokosha Feature Iyi nhevedzano muchina une zvinotevera zvakanakira: 1) Mashini maturusi eakajairwa dhizaini imwe chete ikholamu, Kurutivi bhini, Yakagadziriswa Kutarisana Musoro. Worktable pamusoro Machine mubhedha njanji kuti longitudinal & crosswise kufamba, anogona Archive 360 ​​° muhombe kufamba. Kukanda mamiriro ane zvakanaka kuomarara 2) chokurukisa rutsigiro nezvibodzwa zvitatu, ziva chokurukisa Rigidity zvakanaka & kururama akatsiga zvakanaka. 3) Mashini maturu main drive system ine imwechete kumhanya kwe7.5 kw AC mota drive, thr ...
DZIMWE DZIMA DZIMWE Lathe mubhedha mushure mekuomeswa kwepamusoro, kukuya, kudzima kuomarara HRC50; Musoro weganda mushure mekudzima, kunyatso kukuya kugadzira, kumhanya-kumhanyisa giya chaiyo inogona kusvika padanho rechishanu; Musoro wemusoro unoshandiswa nechero rutsigiro nhatu, kuomarara kwakanaka; Musoro wemusoro unobata mashandiro epakati. Iyo yekudyisa bhokisi giya zvakare INOSHANDISA giya kudzima YEMAHARA EFFICIENCY UYE VERSATILE DESIGN Kutendeuka pamushini kunogona kuita cylindrical zvikamu, yemukati gomba uye kumagumo kumeso, uye c ...
1. Kudhura kwemitengo uye mutengo unonzwisisika. 2.Kusimudza bhatani chiteshi, yemagetsi kabati uye mubhedha wakasanganiswa dhizaini. 3. Tora danda rakadzimwa, rakadzimwa T-mhando gondohwe (sarudzo yekwere gondohwe) uye epurasitiki gwara njanji. 4. Yakashongedzerwa ine 16-chikamu mehendi kutapurirana, mashanu-poindi banga tafura kana mativi banga tafura. Siemens 802C system (mamwe masystem anosarudzika) 6. Danda rakavharwa uye rinodzivirirwa, uye zvikamu zvekukwenenzvera zvinobva zvangozorwa mafuta. 7. Ita JB / T9934.1-1999 NC ve ...
Feature: Muchina uyu unofanirwa kune imwechete chidimbu uye diki batch kana batch kugadzirwa giya kugadzira. Huru magetsi, hydraulic zvinoriumba vanoteya epamba anozivikanwa muchiso zvigadzirwa.Mukiyi kiyi yekukanda lathe mubhedha, ikholamu, nezvimwe nekaviri dhiketi madziro, yakakwira yakaoma simbi chivakwa, chimiro chayo chakabatana, chine simba uye chakasimba kuomarara, kukwirira kwakaringana. Muchina unotora nzvimbo yekushandira hafu chisimbiso nhovo, kwete mafuta, kubvisa mazino ekupumburu kana iko kubvumidzwa, oiri ichidurura kusvibiswa kune yekugadzira nharaunda.
Multi-chitubu: yakanaka muripo mashandiro, un ...
Dhizaini Feature Module chimiro: uchishandisa modular ...
Yakagadziriswa dhizaini: maererano neDIN24960 uye ...
Dhizaini dhizaini: maererano neDIN24960 uye GB65 ...
Zvimiro zveModular zvinhu zvinogadzira setup nekukurumidza ...
Feature: 1. Iyi nhevedzano yezvigadzirwa inotora modu ...
YEMAHARA RIGIDITY DZIMWE DZIDZO Iyo m ...
Muchina mubhedha Mashini chishandiso mubhedha muviri wakakwira ...
Chii Chinonzi Mechanical Seal
1.Maitiro eMechanical Seal Anoshanda Mechiniki chisimbiso chiri peya kana akati wandei akaenzana kune iyo shaft yeiyo hama inotsvedza magumo kumeso mukumanikidza kwemvura uye muripo mashandiro eiyo elastic simba (kana magnetic simba) pasi pechiito chekuchengetedza paste yakabatana pamwe ebetsero chisimbiso kuna ac ...
CNC lathes inogona kushandiswa kugadzirisa yakaoma rotary maumbirwo emuviri. Kugaya ndeyekugadzirisa iyo isina chinhu, iine-kumhanya kutenderera kweyekucheka mucheka mune isina chinhu banga, cheka chimiro uye hunhu hwekudikanwa. Kwakajairika hwokugaya hwakanyanya inowanzo shandiswa nyore zvitarisiko / zvinhu zvakadai contours uye g ...